Fashion | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Fomba fanadiovana pendant volamena - fomba 6
Ny volamena dia vy tsara tarehy sy lafo vidy, saingy rehefa mandeha ny fotoana dia mety hahavery ny famirapiratany sy ny famirapiratany ihany koa izy io. Firavaka volamena - pendants sy pendants - maloto sy maloto, rakotra fonosana matavy. Ireo ...
FiNN FLARE, ambany palitao: fomba fijery, modely ary famerenana
Akanjo avo lenta no hahitana hatrany ny mpividy azy. Ary raha resaka zavatra avy amin'izao tontolo izao marika Finnish malaza FiNN FLARE, dia tsy azo isalasalana - mividy zavatra toy izany ho an'ny ...
Ahoana ny fomba fanavahana ny jeans vehivavy amin'ny lehilahy? Torohevitra momba ny matihanina
Samy tia pataloha jeans ny lehilahy sy ny vehivavy. Hanaiky an'ity fanambarana ity ny rehetra. Toa unisex ireo akanjo ireo, satria samy mijery tsara ny lahy sy ny vavy. Na izany aza, tsy marina izany. Tale ...
Vitacci - kiraro avo lenta ho an'ny fashionistas
Betsaka ny mpanamboatra kiraro ankehitriny. Anisan'ireny Vitacci dia azo avahana. Ny kiraron'ity marika ity dia miavaka amin'ny hatsarana, mihoa-pampana ary kanto. Ho hitanao eto fa tsy ny baoty lava volo fotsiny, fa ...
Akanjo ho an'ny ankizy "Lappy Kids": hevitra, vidiny, famaritana
Ny ray aman-dreny rehetra dia mahatadidy tsara fa ny fitsangatsanganana mahaliana, ary indrindra indrindra, ny fandriam-pahalemana ho an'ny zanany dia manomboka amin'ny safidy akanjo mety. Ary raha amin'ny vanim-potoana mafana dia tsy dia maranitra io olana io, ...
Tsipika momba ny haben'ny vehivavy: Russia, USA, Italia, China
Ny zazavavy rehetra dia tia miantsena, saingy misy ny toe-javatra rehefa lasa tsy zakan'ity fahafinaretana ity. Rehefa tsy maintsy miasa be ianao na mipetraka miaraka amin'ny ankizy dia tsy misy fotoana firy ho anao, ary avy amin'ity ...
"Chanel" - palitao ho an'ny vehivavy mahay sy matoky tena
Amin'ny lafiny kilasika, ny akanjon'ny vehivavy Chanel dia tweed roa. Ahitana zipo sy palitao. Nilaza ny mpamorona malaza fa ny safidy mety dia tokony hanambatra ny lahy sy ny vavy ...
Lohan'ny akanjo ho an'ny lehilahy: karazana sy filazalazana. Ahoana ny fisafidianana satroka ho an'ny lehilahy
Ny satroka ho an'ny lehilahy dia nampiasaina ho an'ny tanjona kendreny hatrizay. Misaotra azy ireo, ny solontenan'ny lahy sy ny vavy matanjaka dia afa-nandositra ny toetr'andro mangatsiaka, ny hafanana ary ny tranga hafa amin'ny atmosfera. Amin'izao fotoana izao dia lasa ...
Loafers: inona ary inona no tokony hitafy
Miova haingana be ny lamaody ka sarotra indraindray ny manaraka ny vokatra vaovao rehetra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny antsipirian'ny fitafiana toy ny loafers isika: inona izy ireo ary inona no lafatra amin'izy ireo ...
Down Jackets Miss Fofo: ny fomba hisafidianana, hikarakarana sy famerenana momba ny kalitao
Ny ririnina dia fotoanan'ny hetsika majika sy hetsika mahaliana. Mandehandeha, mitaingina ski, mitifitra sary amin'ny ririnina, ary mankao amin'ny magazay amin'ny lanezy fotsy mangatsiaka dia mahafinaritra. Ary fahafinaretana ity ...
Ny fahadiovana ny kiraro sy akanjo. Ny akanjo sy ny kiraro fikarakarana
Ny fahadiovana dia efa tao anatin'ny foto-kevitra momba ny hatsarana. Ny fikolokoloana tarehy, vatana, trano, fitafiana ary kiraro dia nijanona ho zavatra tsy ananan'ny besinimaro - fomba fanao isan'andro tsotra izay manampy amin'ny fitazonana ny fahasalamana. Zava-dehibe ...
Akanjo "Faberlik": fanamarihan'ny mpanjifa
Ny akanjo dia singa fitafiana iray, raha tsy misy izany dia tsy misy vehivavy afaka mieritreritra ny fiainana akory. Ny zava-dehibe indrindra dia ny tsy manao hadisoana rehefa miantsena. Ny zavatra dia tokony ho sady tsara no avo lenta. Aloavy ny ...
Ahoana ny fomba hisafidianana habe misy tahiry ka ho mahavariana
Raha vao jerena, dia toa tsy misy sarotra amin'ny fifidianan'ireo tery. Ny ankamaroan'ny zazavavy dia mino fa mahay misafidy ny haben'ny stocking mety. Ahoana no ahafahanao misafidy toy izany ka tsy mila tsy tapaka ...
Oversized coat: inona no hitafy? Soso-kevitra amin'ny ankapobeny.
Ny fomba goavambe dia safidy akanjo tsotra sy mety ho an'ny vehivavy izay reraky ny mitazona ny tenany ao anatin'ny fetra sasany. Ny làlana lamaody dia akanjo lava, toy ny nesorina tamin'ny soroky ny olon-kafa. Toerana manokana…
BASK - palitao nidina ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy: hevitra
Ny toetr'andro manerana ny planeta midadasika dia samy hafa na aiza na aiza, ary any amin'ny toerana tsy maintsy ampifanarahan'ny olona amin'ny hafanana tsy zaka, any amin'ny toerana iainana ny fangovitana matetika, ary any amin'ny toerana iaretana ny maripana ambany, ny hatsiaka sy ny rivodoza ...
Inona no tokony akanjo amin'ny zipo volo? Torohevitra momba ny lamaody
Araka ny fomban-drazana, ny volondavenona dia hita ho safidy malemy kokoa amin'ny mainty tsy miandany. Izy io dia mifanaraka tanteraka amin'ny bika aman'endriny, bika aman'endrika, ofisialy ary fanatanjahan-tena. Miankina amin'ny fomba filalaovana ny endrika sy ny loko mifameno izany. ...
Ahoana ny fisafidianana pendant ho an'ireo mpitia roa (sary)?
Azo atao anaty fefy firavaka toa ny mahazatra ve ny fanambaram-pitiavana? Eny, raha pendant ho an'ny olon-tiana roa, izay nofinidin'ny olona iray izay te hibaboka amin'ny vadiny sy izao tontolo izao ...
Inona no tokony homena amin'ny 30 ho an'ny namana: misafidy ny fanomezana tsara indrindra
30 taona dia tsingerintaona matotra. Na izany aza, tsy ny taona tokony hanafenana tovovavy ity, ary noho izany dia ankalazaina amin'ny fetibe lehibe ny fialantsasatra. Raha nasaina tamina fankalazana toy izany ianao, dia ...
Sunglass amin'ny maso saka mahatalanjona
Ny "mason'ny saka" solomaso solomaso dia nanjary malaza hatramin'ny taona tsara indrindra tao Marilyn Monroe. Ary mandraka ankehitriny, ity karazana frame ity dia mbola mitaky ny fangatahana eo amin'ny vehivavy manerantany. Rehefa dinihina tokoa, samy ...
Niqab: inona izany? Famaritana, sary
Mpivavaka be ny Silamo. Ny solontenan'ny kolotsaina Silamo dia manaraka tsara ny fanao sy ny fitsipiky ny fivavahana. Ireo fitsipika ireo dia misy ny fitafiana tsy maintsy ataon'ny vehivavy satroka manarona ny volon'izy ireo. Iray amin'ireo singa nentin-drazana amin'ny fitafiana arabo ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 36 Next Page
54 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 38,799.